चौथो स्टेजको क्यान्सरसँग जुधिरहेका ५ वर्षका छोराले आमालाई सोधे, ममी हामी घर कहिले फर्किने ? गीताको थामिएन आँशु – Dainik Samchar
April 10, 2021 393
काठमाडौँ । बन्दिथ जम्मा ५ वर्षका भए । उनलाई क्यान्सर भएको थाहा छैन । सन् २०२० को नोभेम्बरदेखि अस्पताल भर्ना भएका छोराले गम्भिर प्रकृतिको क्यान्सरसँग जुधेको टुलुटुलु हेरेकी आमा गिताले सम्झिइन्की भक्कानिन थाल्छिन् । गिताका आँखामा शाँसु भरिएको धेरै भयो । आमाका आँशु हेर्दै छोरा बन्दिथले भन्छन् ममी हामी घर फर्किने कहिले हो ?
Prevज्वरो र खोकी केही छैन, तर पनि सावधान, यस्तो छ कोरोनाको नयाँ स्ट्रेनको खतरनाक लक्षण
Nextसाह्रै पीडित आमा को यो भिडियो हेरेर सेर गर्दिनु होला